Senuti u Mac - Ladnaansho Music ka iPod / iPhone / iPad
> Resource > Transfer > Senuti u Mac - Tool The Best inuu ka soo kabsado Music ka iPod & iPhone
In nolol maalmeedka, waxaa laga yaabaa inaan la kulmaan xaaladahan soo socda:
1. Ka dib markii ay u bedesheen Mac ah, oo kaliya si aad u hesho qaar ka mid ah dadka aan Lugood iibsaday heeso ka maqan Music Lugood Maktabadda.
2. Sababtoo ah shil lama filaan ah, waxa ku jira oo dhan ee Lugood Library kaliya tageen.
3. Qaar ka mid ah heesaha ku xayiran yihiin jir iPod, oo aan la koobiyeyn karaa la Lugood Library.
Haddii mid ka mid ah xaaladaha kor ku xusan aad dhibaya, waxaad u baahan tahay in la isku dayo Senuti u Mac. Senuti u Mac waa wax yar oo qalab ah oo kuu ogolaanaya in aad nuqul ka heeso ka iPod iyo iPhone si toos ah aad Lugood Library fayl ku Mac. Tani waa waxa Lugood ma aan samayn karo iyo meesha Senuti soo gala sawirka. Waxay u baahan tahay Mac OS X 10.5 iyo ka dib. Waxaan u isku dayay. Waxaa weyn ka shaqeeya. Waxaad kartaa download u leeyihiin isku day ah.
Ma is weydiisay jiro wax Senuti for kale Mac? Ok, dhab ahaantii, waxaa aan aad u badan yihiin. Waxaa jira qaar ka mid ah Senuti barnaamijyada Windows , laakiin qaar badan Senuti u Mac dhigma. Mid ka mid ah waxaan isku daynay iyo jeclaa aad u badan yahay Wondershare TunesGo (Mac) . Waxaa ka shaqeeya sida Senuti u Mac. Ka sokow bixinta oo dhan qaababka sida Senuti, waxa ay bixisaa in ka badan fursadaha. Hoos waxaa ku qoran sifooyinka muhiimka ah ee Senuti u Mac u dhigma - Wondershare TunesGo (Mac).
Ha hadalkayga qaado, waxaa ka? Hel version maxkamad si xor ah u leeyihiin isku day ah! Senuti for Windows waa la heli karaa si ay u soo bixi sidoo kale.
Features muhiimka ah ee Senuti wax u dhigma Mac
Recovery Simple - 1 tallaabo u isticmaala Mac inuu ka soo kabsado dhan music iyo playlists ka iPod iyo iPhone in Lugood Music Library.
Tus ka masaf - TunesGo (Mac) barbardhigi doono heeso ku saabsan users 'iPod, iPhone, iPad ama la kuwaas oo Lugood Library, kaliya kaga dayanayaan, kuwaas oo ka baxsan Lugood Library ka iPod, iPhone iyo iPad in Lugood Library.
Taageer files badan - Marka la barbar dhigo Senuti u Mac, Wondershare TunesGo (Mac) taageerada dayanayaan files dheeraad ah, sida Lugood U, Voice Deymaha maqan, Podcasts, iwm ka iPod taabto, iPhone, iPad iyo in Library Lugood ah. Iyo music iyo playlists loo gudbin karaa ka nano iPod / shaandheeyn / classic in dadka isticmaala 'Mac sidoo.
Maamul files on aaladaha Apple - TunesGo (Mac) sameeya in ka badan Senuti u Mac. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala in lagu daro iyo gabaygayga, video ama sawir ka ah Mac si Apple qalabka, aan syncing iyo tirtiro xogta. Oo waxay tahay in aad awoodid in aad tirtirto files aan la rabin.
Sida loo isticmaalo Senuti wax u dhigma Mac - Wondershare TunesGo (Mac)
Download iyo rakibi TunesGo (Mac) on your Mac. Waxaa xitaa taageertaa OS X dambeeyay 10.11, El Capitan;
Connect aad iPod, iPhone, iPad ama aad Mac iyo abuurtaan TunesGo (Mac).
On uu furmo suuqa ugu weyn, haddii aad guji "Si Lugood", ka dibna heeso iyo playlists on qalab aad waxaa loo wareejin doonaa in aad Lugood Library la kuwa hadda jira funneled. Haddii aad guji "Si Mac", heeso iyo playlist lagu wareejin doonaa Mac.